Ihe ị ga-ahụ n'obodo Trieste na |tali | Akụkọ Njem
Trieste bụ obodo pụrụ iche, emi odude ke edere edere n̄kan̄ Italy, emi ekperede Inyan̄ Adriatic onyụn̄ adiana ye Slovenia. Ọ bụ isi obodo mpaghara mpaghara Fruili-Venezia Giulia. Obodo a bụ ite na-agbaze ọdịbendị dịgasị iche iche, ebe ọ bụ na ọ dị n’ Italytali, otu ụzọ si Slovenia ma bụrụkwa akụkụ nke Alaeze Ukwu Austro-Hungarian. Ọ bụ ezie na ọ kabeghị enwe ike ịkọwapụta ewu ewu obodo ndị ọzọ dị na Itali, ọ bụ ebe kwesịrị ịhụ.
Nke a ọtụtụ mmadụ bịara leta obodo dịka James Joyce ma ọ bụ Ernest Hemingway. Ọ bụ obodo mara mma, nke yiri ka ọ na-akpali akpali ma nwee ihu igwe dị mma, belụsọ mgbe bora a ma ama na-efe, ifufe siri ike nke na-apụta naanị oge ole na ole n'afọ. Anyị ga-amatakwu banyere obodo a pụrụ iche nke Trieste.
1 Marelọ Miramare
2 Mpaghara Ogwe
4 Roman nkiri
5 Caflọ ahịa ochie ochie na Trieste
6 Rieslọ ngosi ihe mgbe ochie Trieste
7 Risiera na San Sabba
E wuru ọmarịcha ụlọ a na narị afọ nke XNUMX ma dịrị na ebe mara mma, na-ele Osimiri Adriatic. Wuru ụlọ a maka Archduke Maximilian nke Hasburg na nwunye ya Charlotte nke Belgium. O doro anya na e nwere akụkọ akụkọ na onye ọ bụla nke tinyere ogologo oge n'ime mgbidi ya ga-anwụ n'oge na-adịghị anya dị ka Archduke. N'ọnọdụ ọ bụla, na nke a anyị ga-eme obere nleta, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịhapụ ebe a mara mma. Agba ọcha nke nkume ahụ dị iche na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke ubi gbara ya gburugburu na-acha anụnụ anụnụ nke oké osimiri, ebe ọ bụ na ọ dị mma. Iji hụ ya n'ime, ị ga-akwụ ụgwọ nbata, mana karịa ubi niile na echiche ha bara uru.
Ugbua na etiti Trieste anyị nwere ike ịga Piazza della Unità, ebe kachasị dị n'etiti. N'ime obosara a ma maa mma, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ obí eze dị ka Obodo, Obodo Gọọmentị, Pitteri Obí, Stlọ Stratti na Obí Modello n'etiti ndị ọzọ. Theselọ ndị a niile na-enye square a ụdị ọkaibe na nke pụrụ iche. Na Palazzo Stratti, anyị nwere ike ịchọta otu n'ime ụlọ ahịa kachasị mma n'obodo a, nke nwekwara ọtụtụ ndị nwere mmasị. N'ime ụfọdụ n'okporo ámá ndị dị nso anyị ga-ahụkwa ụlọ ọrụ ndị njem nleta ebe anyị nwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara ebe ndị nwere mmasị na Trieste. E nwekwara ebe ndị ọzọ a ga-agakwa n’obodo ahụ dịka Plaza de la Borsa ma ọ bụ Plaza Goldini, ọ bụ ezie na ha adịghị mkpa dị ka nke a.
Nọmalị mgbe anyị gara obodo anyị chọrọ ịhụ ya akụkọ ihe mere eme akụkụ, kacha ezigbo ebe. Ọfọn, na Trieste ebe a bụ San Giusto. N'akụkụ a, anyị nwere ike ịhụ katidral nke obodo ahụ, site na narị afọ nke XNUMX, nwere njirimara nwere ọcha ọcha mara mma na facade. Ihe na-esote katidral ahụ bụ Castillo de San Giusto, na ebe mara mma maka echiche ya. Taa, a na-eji ya dịka ebe ngosi na ebe nchekwa ihe na ebe ngosi nka.
N’ebe nile n’ Italytali, ị ga-ahụ ebe ụfọdụ nke Alaeze Ukwu Rome, nke dịrị ọtụtụ narị afọ ma nwee mgbasawanye dị ukwuu. Gbanye Trieste agaghị achọpụta ụlọ ihe nkiri Rome a site na XNUMXst narị afọ AD. C. ruo na narị afọ nke XNUMX, n'ihi ihe ndị e gwupụtara n'ógbè ahụ. Nke a debere ya n'ọnọdụ dị mma. Taa, a pụrụ ịhụ ihe ndị a n'ụzọ doro anya n'etiti n'okporo ámá, ọ bụ ezie na ha dịpụrụ adịpụ maka nchekwa ha.
Caflọ ahịa ochie ochie na Trieste
Trieste bụ obodo kwụpụrụ ịbụ ebe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị omenaala. Ọ bụ ya mere e ji nwee ọtụtụ ụlọ kọfị akụkọ ihe mere eme ha nwetakwara ụdị nke ndị ahụ si na Vienna, na-enye ụdị kọfị na swiiti dị iche iche. Taa ụlọ ahịa ochie ndị a ka nwere mmasị na ndị bịara n'obodo ahụ ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha bụ akụkọ ihe mere eme. Offọdụ ndị anyị kwesịrị ileta bụ Café San Marcos, Café Torinese ma ọ bụ Café Tomaseo.
Rieslọ ngosi ihe mgbe ochie Trieste
N’obodo a enwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie nwere ike ịmasị. Museumlọ ebe a na - edebe ihe ochie na Civic Museum na History na Ortho Lapidary na-enye anyị iberibe ihe ọmụmụ ihe ochie nke obodo na-agwa anyị gbasara akụkọ obodo ahụ. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịhụ nchịkọta ndị ọzọ nke omenaala dịka Mayan ma ọ bụ Ijipt. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ obodo ndị ọzọ enwere Museum Museum nke Oge Ochie, ebe anyị ga-ahụkwa Civic Library na Joyce Museum. N'aka nke ọzọ, anyị nwere Museum of Oriental Art raara nye ọdịbendị China na Japanese ma ọ bụ Revoltella Museum nke bụ gallery nke nka ọgbara ọhụrụ.
Risiera na San Sabba
Nke a bụ a nleta dị mkpa maka uru ọ bara. Risiera di San Sabba bụ naanị ogige ịta ahụhụ ndị Nazi na Italytali na n'ime ya anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe mere ebe ahụ, ihe onwunwe nke ndị ahụ metụtara ma mụta banyere akụkọ ntolite nke ogige a. N’ebe a gbara ozu maka ozu ndị a, ewuru ihe ncheta iji sọpụrụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Trieste
6lọ nkwari akụ XNUMX kacha mma na Copenhagen